Ogaden News Agency (ONA) – Shir Mucaaradka Itoobiya Ay Addis Ababa Kulahaayeen oo Burburay.
Waxaa magaalada Addis Ababa lagu qabtay shir balaadhan oo ay kasoo qayb galeen in kabadan 50 urur oo mucaarad ah kuwaas oo aan hada kahor fursad uhelin in ay kushiraan wadanka gudihiisa.
Kulankan oo kadhacay Ras Hotel oo kuyaala magaalada Addis Ababa ayaa ladoonayay in lagaga hadlo isbadalka Itoobiya kasocda iyo qaabkii ay mucaaradku uga qayb galilahaayeen ama ay dowlada ula hadli lahaayeen.
Kulanku intuu socday waxaa lagu heshiiyay in laqabto shirwayne qaran oo loogaga arinsado dhibaatooyinka jira iyo siyaasadaha isgarabyaaca ah ee wadanka kajirta iyo waliba colaadaha qabaa’ilka oo meelo badan oo wadanka ah kajira.
Hase yeeshee waxaa lagu heshiin waayay ergadii ladoonayay in loomadho si ay howlahaas ufududeeyaan una qabanqaabiyaan shirwayne, waxayna taasu kaliftay in lagu kala kaco shirkii ladoonayay in ay midho kasoo baxaan.
Ururada mucaaradka ah ayaa kukala aragti duwan maamulka dalka iyo sidii loosamaysan lahaa wax heshiis lagu yahay, waana arinta sababtay burburka shirkii balaadhnaa ee kasocday magaalada Addis Ababa, kaas oo mudo dheer qabanqaabadiisu ay socotay.
Aqoonyahan iyo dad kale oo wax garad ah oo kusugan magaalada addis Ababa ayaa dadaal ugu jira sidii uusan shirku ufashilmi lahayn hase yeeshee macada in ay guul kagaadhi doonaan iyo in kale dabqaadka ay bilaabeen.